Google AMP-Cache URL-Generator - MG
offline_bolt Mamorona pejy AMP
assignment_turned_in Fanamarinana cache cache AMP
power Modely AMP mpiblôgy
warning Tsy mandeha ny plugin AMP?
extension Kaody AMP Google Analytics
extension Fanisana an-tserasera AMP IVW
extension Embed AMP Tag YouTube
extension Mamorona Slider Carousel AMP
extension Ampidiro ny tag iframe AMP
extension Fomba fiasa lisitra mivantana AMP
edit_attributes Fampandrenesana fiarovana ny angona
Generator url cache Google AMP
Ny Google-AMP-Cache-URL-Generator dia mamorona URL mety ao amin'ny AMP-Cache-Format avy amin'ny URL mahazatra isaky ny pejy, amin'ny tranonkala rehetra.
Mamorona URL amin'ny cache Google AMP
- Andraso azafady -
- voamarina ny tranonkala -
URL cache Google AMP namboarina
Manamboara url cache cache AMP
Miaraka amin'ny URL cache namboarina, ny kinova AMP an'ny tranokala voatahiry ao amin'ny cache Google AMP dia azo antsoina hoe RAHA ny pejy mifanaraka aminy dia efa natontan'i Google ary voatahiry ao amin'ny cache Google.
Ny endrika URL cache cache AMP
Raha azo atao, ny Google AMP Cache dia mamorona subdomain ho an'ny pejy AMP rehetra izay eo amin'ny sehatra iray ihany.
Voalohany, ny domaine an'ny tranonkala dia navadika tamin'ny IDN (kaody pony) ka lasa UTF-8 . Misolo ny lohamilina cache:
tsirairay - (1 hypes) ka hatramin'ny - (hypeny 2)
daholo . (Isa 1) hatramin'ny - (hypo 1)
Ohatra: amp-cloud.de ho lasa
Ny sehatra niova fo dia ny adiresy host an'ny URL cache Google AMP. Amin'ny dingana manaraka, ny cache cache feno dia atambatra, miaraka amin'ireto faritra manaraka ireto manampy ny adiresy mpampiantrano:
tondro izay manasokajy ny karazan-drakitra
a / c / ho an'ny fisie AMPHTML
a / i / ho an'ny sary
a / r / ho an'ny endritsoratra (endritsoratra)
tondro iray ahafahana mampakatra amin'ny alàlan'ny TSL (https)
a / s / hampavitrika
ny URL tany am-boalohany ny tranokala tsy misy ny tetika HTTP
Ohatra iray amin'ny URL ao amin'ny Google AMP Cache URL:
URL tany am-boalohany ohatra:
Url amin'ny cache AMP teorika:
Inona ny cache Google AMP?
Ny ampahany amin'ny fanafainganana ireo tranokala amin'ny endrika Google AMP dia vokatry ny fitehirizana mandeha ho azy ao amin'ny cache mpizara amin'ny fikarohana Google . Midika izany fa ny kinova AMP an'ny tranokala dia tsy entina avy amin'ny mpizara tranonkala, toy ny mahazatra, fa avy amin'ny valin'ny fikarohana an'ny Google, avy amin'ny iray amin'ireo mpizara Google (ny cache mpizara Google AMP) , izay mazàna mamela fotoana fampidinana haingana kokoa.
Midika izany fa manisy index ny Google ary mitahiry ny kinova amin'ny pejy AMP amin'ny mpizara azy manokana, eo ambanin'ny URL mpizara cache cache tsy miankina iray izay noforonina araka ny lamina manokana. Amin'ity URL ity, amin'ny endrika cache cache AMP , azonao atao ny miantso sy mijery ny kinova AMPHTML amin'izao fotoana izao izay voatahiry ao amin'ny cache cache an'ny motera fikarohana Google. - Fampahalalana bebe kokoa momba ny cache Google AMP .
Mamorona pejy AMP Fiarovana angona sy fampiasana cookie marika
Salama ary misaotra anao tamin'ny fitsidihanao! - Ny cookies dia ampiasaina handaminana ny fiasan'ny "www.amp-cloud.de". Ity dia mety misy koa serivisy sy atiny avy amin'ireo mpamatsy antoko fahatelo, ohatra ny fanomezana ny haino aman-jery sosialy na ny atin'ny horonantsary, fa mba hahafahana manatsara ny famakafakana statistika momba ny fahombiazan'ny tranonkala ary hanomezana vola ny tranokala amin'ny fisian'ity pejy ity fanohanana. Miankina amin'ny asany, ny angona azo omena anao dia azo ampitaina amin'ny antoko fahatelo ary alefan'izy ireo. Azonao atao ny mahita bebe kokoa momba ny fampiasana sy ny safidy amin'ny fanovana ny toeranao cookie eto: Fampahalalana momba ny fiarovana ny angona
Avelao ny cookies rehetra
Lavao ny cookies rehetra